Ukugeleza kwabavakashi phakathi kwe-Azerbaijan neBulgaria kukhuphuke kakhulu
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » Ukugeleza kwabavakashi phakathi kwe-Azerbaijan neBulgaria kukhuphuke kakhulu
Izindaba Zase-Azerbaijan • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zeBulgaria Breaking • Investments • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
I-Azerbaijan neBulgaria bazimisele ukwandisa ukubambisana kuyo yonke imikhakha kubandakanya ezokuvakasha, uNikolay Yankov, Inxusa laseBulgaria e-Azerbaijan utshele iTrend Publication engxoxweni yakamuva.
Inxusa lithe ukugeleza kwabavakashi phakathi kwe-Azerbaijan neBulgaria kukhule kakhulu ngokwethulwa kwendiza engapheli eBaku eya eSofia.
"Isibalo sama-visa akhishiwe ezakhamizini zase-Azerbaijani sikhuphuke okungenani ngamaphesenti angama-40 selokhu kwavulwa indiza, futhi sikholwa ukuthi kulo nyaka isimo esihle sizoqhubeka ngemuva kokuvula kabusha izindiza ezijwayelekile entwasahlobo," esho.
Inxusa ligcizelele ukuthi inhloso ukuletha imiphumela ebonakalayo kwizakhamizi zaseBulgaria nase-Azerbaijan.
"Manje kunamathuba amaningi okusondelana okukhulu phakathi kwabantu bakithi kanye nokuxhumana okukhulu ebhizinisini, ubudlelwano bezomnotho obunamandla," kugcizelela uYankov.
Ngaphezu kwalokho, ethinta ukwenziwa lula kombuso wamavisa phakathi kwamazwe, inxusa lathi iBulgaria ayibeki mithetho yama-visa ahlanganyele kwamanye amazwe, kepha ilandela inqubomgomo ye-EU kulokhu.
“Inxusa lethu lisebenza ngokwesivumelwano esiphakathi kwe-European Union ne-Azerbaijan mayelana nokwenza lula ukukhishwa kwama-visa [inhloso yalesi Sivumelwano, esaqala ukusebenza ngoSepthemba 1, 2014, ukwenza, ngokwesisekelo sokubuyisela, ukukhishwa kwama-visa wokuhlala okuhlosiwe okungekho ngaphezu kwezinsuku ezingama-90 esikhathini esiyizinsuku eziyi-180 ezakhamuzini ze-EU nase-Azerbaijan].
Isigaba sommeli wenxusa lihlala lisebenza ngokugcwele ukuze linikeze impendulo esheshayo kuzidingo zabafakizicelo be-visa futhi lizama ukuqhubeka nokufaka izicelo zama-visa ngesikhathi esifushane ngangokunokwenzeka.